Liverpool Oo Loo Sheegay In Ay Man United Ku Garaacdo Saxiixa Xidiga Tottenham Ee Christian Eriksen. - Gool24.Net
Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa ahaa labada kooxood ee lala xidhiidhinayay xidiga kooxda Tottenham ee Christian Eriksen kaas oo iska diiday in uu wax heshiis cusub ah u saxiixo kooxdiisa Spurs.
Laakiin Liverpool ayaa lagula taliyay in ay Manchester Unitedku garaacdo saxiixa Christian Eriksen kaas oo la ogaa sidii ay Reds ugu hungowday markii ay Tottenham ka hor qaaday.
Xidigii hore ee kooxda Tottenham ee Jamie O’Hara ayaa Liverpool u sheegay in Christian Eriksen uu yahay nooc ciyaartoyga khadka dhexe ee ay u baahan yihiin.
Xidiga reer Denmark ee Christian Eriksen ayaa dhamaadka bishan June waxa uu gali doonaa 12 kii bilood ee heshiisiisa Spurs ugu danbeeyay wuxuuna cadeeyay in uu diyaar u yahay in uu tartan cusub meel kale ka raadsado.
Xidigii hore ee kooxda Tottenham ee Jamie O’Hara oo ka hadlaya sida ay Liverpool ugu baahan tahay Christian Eriksen ayaa yidhi:” [Liverpool] waxay u baahan tahay ciyaartoy khadka dhexe ah,waxaana helay shakiga ah in ay isku dayi karaan oo ay Eriksen ka soo qaadan karaan Tottenham maadaama oo uu galay sanadkii heshiiskisia ugu danbeeyay”.
Xidigii hore ee kooxda Tottenham ee Jamie O’Hara ayaa sheegay in Christian Eriksen uu yahay nooca ciyaartoyga ay Liverpool u baahan tahay wuxuuna yidhi: “Isagu waa nooca ciyaartoy ee ay iyagu u baahan yihiin”.
Christian Eriksen ayaa ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee horyaalka premier league ugu fiican iyada oo hadda Real Madrid awooda saaraysa Pual Pogba waxayna Reds ka mid noqon kartaa kooxaha la saxiixan kara Christian Eriksen.
Taageerayaasha Liverpool ayaa baraha bulshada ku soo bandhigay sida ay u jeclaan lahaayeen in ay kooxdooda ku heli karaan saxiixa Christian Eriksen kaas oo lix sanadood ka hor ay Reds doonaysay intii aanu Spurs u wareegin.